Dr Abiyyi kaabinee isaa boru paarlaamatti akka dhiyeessu beekameera - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Dr Abiyyi kaabinee isaa boru paarlaamatti akka dhiyeessu beekameera
Siraaj Fageessaa, barreessaan Komaand Poostii fi ministerri Ittisa Biyyaa, kaabinee muummicha ministeraa Dr Abiyyi keessatti akka hin ammatamne barame. Siraaj Fageessaa hanga daqiiqaa dhumaatti Dr Abiyyi filtamuu hin qabu jedhee nama garee Woyyaanee waliin dhaabatee mormaa ture dha.
Dr Nagarii Leencoos bakka isaa dhabeera. Dr Nagariin gara sadarkaa Oromiyaatti gadi bu’eera. Namoota Dr Abiyyi filatamuu irra du’uu naaf woyya jedhaa ture keessaa inni tokko Dr Abraham Takastee, ministera Faayinaansii fi Diinagdee, ti. Hireen isaa maal akka ta’u hin beekamne. Jibbaa sadarkaa sanii baadhataa Dr Abiyyi waliin sadarkaa ministeraatti hojjachuun rakkisaa ta’uu mala.
Kaabineen Dr Abiyyi boru paarlaamaaf dhiyeessu keessatti fuulli haarofni akka mudhatutu eegama. Garuu, fuula beeknu keessaas worri ganduma san turan jiru. Dr Worqinaa Gabayyoo Ministera Haajaa Alaa akka ta’etti itti fufa. Ministerri Ittisa Biyyaa miseensa OPDO ta’uu mala oduun jettu jirti. Ob Mallas Alam (TPLF) Ministera Dhimma Kominikeeshinii akka ta’u beekameera. Shifarraa Shugguxee (Kibba) Ministera Qonnaa ta’eeti muudama.
Previous articleHaasawa Dr Abiyyi Ahmad, muummichi ministera Itoophiyaa, magaalaa Ambootti godhan
Next articleMuummichi Ministeraa, Dr Abiyyi Ahmad, kaabinee haarawa dhaaban